Mkpuchi ntutu ntutu nke Brazil Mkpuchi ntutu ntutu nke Brazil
Mkpuchi ntutu ntutu nke Mịnịstrị nke Brazil - Mgbatị Ọgbọ na-adịbeghị anya
Deepụ ntutu Mgbapụ Anya Mkpọchị Brazil
Ịgachi price $ 160.00
Hairkwụ ntutu Brazil anyị kwụ ọtọ bụ ezigbo mma & kwe nkwa ịbụ ntutu na-amaghị nwoke. Ntutu nwere ntutu dị mma nke ọma, enwere ike ịkpụ ya, na agba ya, wee kwee ya na ụdị ya ọtụtụ oge n’enwezighi ya.
Anyị Deepụ ntutu Mgbapụ Anya Mkpọchị Brazil na- Emere naanị site na ntutu isi ụmụ mmadụ mara mma. N'ihi ụdị ntutu dị iche iche na nke osisi dị iche iche na Brazil n'ụdị ntutu a na-achọsi ike. A na-enweta ntutu isi anyị site na ndị na-enye onyinye na-akabeghị ya na-eme ka ntutu dị ogologo. Ntutu ahụ ga-adị afọ 2 ma ọ bụ karịa n'ihi ike ebumpụta ụwa nke ntutu na ọkpọkọ.